Mampifandray An’i Istanbul sy Londra Hifarimbona Amin’ny Fetiben’ny Web We Want · Global Voices teny Malagasy
Mampifandray An'i Istanbul sy Londra Hifarimbona Amin'ny Fetiben'ny Web We Want
Voadika ny 06 Septambra 2014 15:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, বাংলা, English
Fetiben'ny Web We Want/Southbank Centre. Nahazoana alalana ny sary.
Dimy amby roapolo taona lasa izay, namorona ny World Wide Web (Harato Mahahenika izao Tontolo izao) Andriamatoa Tim Berners-Lee ary nanolotra izany hoan'izao tontolo izao. Mba hanamarihana izany tsingerintaona izany, eo am-pikarakarana fetibe vaovao misy fizarana lehibe telo izahay ao Southbank Centre, ka angatahanay ny karazan'olona rehetra mba hizara ny heviny mikasika ny mety hivelaran'ny Harato ao anatin'ny 25 taona manaraka.
Avy amin'ny aingam-panahy tamin'ny nananganan'i Tim Berners-Lee ny Fikambanana Mpanao Asa-Soa World Wide Web sy ny fiarahanay miombon'antoka amin'ny hetsika manerantany «Web We Want» ataonay maimaim-poana, misokatra sy manerantany, fankalazana goavana mikasika ny fanovana noentin'ny aterineto teo amin'ny fiainantsika ny Fetibe Web We Want. Hitrandrahana ny zavatra sasany mety hanimba ny aterineto araka izay fantantsika sy ny vahaolana azo haroso ihany koa izany.
Raha mitaratra ny vinan'i Tim Berners-Lee mametraka ny harato (tranonkala) ho toeran'ny fitoviana, mangataka amin'ireo vondrom-piarahamonina ao amin'ny faritra sy lavidavitra izahay, ireo mpifanolo-bodirindrina sy ireo vahiny, teknisiana sy tsy tia resaka teknolojia, tanora sy antitra, ambonivohitra sy ambanivohitra izahay, amin'ny ambaratongam-pahaizana aterineto rehetra mba na manao ahoana na manao ahoana ny fahaizan'izy ireo ny tranonkala mba hanangan-javatra atao amin'ny fetibe.
Amin'izany, hanatontosa “Web We Want Think-In” isika amin'ny 5 Septambra [fotoana efa lasa] amin'ny fandrafetana fetibe, ary hihaino ny hevitrareo rehetra miaraka. Ity fotoanan'ny dinika antserasera ity dia hotontosaina ao amin'ny Think-In Hub ao Istanbul mandritra ny Internet Ungovernance Forum (eto ny antsipirihany) sy ao Londra mandritra ny Royal Festival Hall (misoratra anarana eto raha hanatrika izany). Afaka mandray anjara avokoa ny tsirairay ao amin'ny ateriento amin'ny fampiasana ny diezy Twitter #WebWeWantFest.
Manolora hevitra amin'ny artista, eritreritra ary hetsika tianao ho hita mba hahatonga ny fetibe ho fanoitra iray amin'ny hetsika manerantany. Mandraisa anjara amin'ny lanonana!
Tantaran'ny Angletera farany
Afrika Mainty 4 herinandro izay
Aostralia 31 Oktobra 2021
Aostralia 16 Oktobra 2021